समुद्र तटको साथ मस्कोको नजिकै उत्तम होटेलहरू
होटल रिस "ट्रेरा मोजा" - डिमोरा डी 'EPOCA, इटाली
होटल षडयध्याब, क्रोएशिया
कोको बोरो HHEHI HIHI HITI होटल, माल्दिभ्स
मालिबु निजी बीच अपार्टमेन्टहरू, क्यालिफोर्निया
रिसोर्ट स्पाएट स्पेट होटोर होटॉयर पोइन्ट लक्जरीका बीचमा, केन्या
समुद्री तट होटलहरू सफाको लागि उच्च अंकहरूको साथ होटलहरू: के छनौट गर्ने?
स्पा होटेल "टापुहरू", सोची, रसिया
suchi मा सबै भन्दा राम्रो होटलहरू: सिफारिसहरूको साथ समीक्षा
स्विसोटेल रिसोर्ट सोची रिलीसिया *
Play मूल्यहरू हाम्रा साझेदारहरूले प्रदान गरेका छन् र प्रति दिन कोठा र करहरू र हाम्रा साझेदारहरूलाई चिनिने शुल्कहरू समावेश गर्दछ। विस्तृत जानकारी हाम्रो पार्टनरहरूको वेबसाइटहरूमा प्राप्त गर्न सकिन्छ।
के तपाइँ निजी समुद्रको लागि मात्र ओलिग्रासको लागि मात्र हुन् भनेर सोच्नुहुन्छ? यो राय परिवर्तन गर्ने समय हो। विश्वसँग ठूलो संख्यामा होटेलहरूको होटेलहरूको एक विशाल संख्या छ र पारदर्शी पानी तटहरू। तिनीहरू तपाइँको लागि प्रकृति संग एकता पूर्ण लागि पर्खिरहेका छन्, र अब माउर ओड मा घाम ओछ्यान लिनुपर्दैन। हामीले निजी बेमासहरूको साथ संसारमा शीर्ष it होटलहरू उठायौं।
पर्खाल, एक निजी समुद्र तटमा लक्जरी होटलमा परिणत भयो, छाल धुनुहोस्। चन्द्रमा मुनि बालुवाको माध्यमबाट हिंड्न र छतमा जालुजीमा जानुहोस्, तुस्कोनी र समुद्रको आश्चर्यजनक दृश्यको साथ।
मध्ययुविकको पुरानो शहर डब्ल्यूब्रोभनिकको रोचक दृश्य र एड्रियाेटिक सागर पोष्ट गरिएको छ। दिउँसो, पाहुनाहरूले निजी समुद्र तटमा अजुर-निलो पानीमा डुबाउन सक्दछन्, डिजाइनर फर्निचर फर्नीचर र भाँडामा बोटबिरुवामा एक स्पाइलेल पिउन सक्छन्।
यदि केवल एक निजी समुद्री तट पर्याप्त छैन भने, निजी टापुको बारेमा कसरी? एयरपोर्टबाट उच्च-गति डु in ्गामा 40 मिनेट - र तपाईं मा। एक अर्काबाट टाढा पानीमा विशेष भिलाहरू उपलब्ध छन्। यस्तो देखिन्छ कि टापुमा तपाईं बाहेक कोही कोही छैन। तपाईंको आफ्नै टेरेसबाट एक ट्यूबको साथ डुब्नुहोस् र अक्टोपस, समुद्री चट्टानहरूमा घुमाउनुहोस् अक्टोपस र रीफ शार्कहरू।
श्रृंखला "मालिब्ल्युवा उद्धारकहरू" को नायकसँग आफैंलाई महसुस गर्नुहोस् "मल्टिवा बचाउँदै। प्रत्येक फिक्का पहेंलो घरमा त्यहाँ चम्किलो सूर्य लाउन्जर, छाता र बोटहरूमा भाँडामा छ।
सूर्यास्तको समयमा निजी र Lib को शेडमा चित्रित हुँदा सूर्यास्तको समयमा निजी सुन्दर हुन्छ। पाहुनाहरू समुद्री किनारमा वा पानामिक पोखरी नजिकको पामका रूखहरूको हाँगाहरूबाट झुण्डिएको फ्ल्यासलाइटहरू नजिकको र बालुवामा न्यानो रेहरू फ्याँक्दै।
पाँच-स्टार "तात्नम्यान सोची केन्द्र" ले प्रमाणित गर्दछ कि विदेश जान आवश्यक छैन। सबै कुरा यहाँ प्रदान गरिएको छ: कफि मेशिन र तकियाहरू विन्डोजबाट चम्पन र मतवाला प्रजातिहरूको मेमोरी प्रभावका साथ तकियाहरू। लबीमा तपाईंलाई समकालीन कलाको प्रदर्शनीद्वारा स्वागत छ, र हम्मामा - आराधना नुहाऊ र चप्पल।
समुद्री तट भाग पुलम्यान सोची सेन्टरको पाहुनाहरूको लागि मात्र हाइलाइट गरिएको छ, ती शुल्कहरू पनि बाहिर निकाल्दैनन्। समुद्री किनार र शौचालयहरूमा, अतिथिहरू कुञ्जी कार्डमा खस्छन्, र होटेलको प्रवेशद्वारमा, सबै माना तापमान - एक नयाँ शिष्टाचारको साथ कार्यहरूमा निकटताका साथ नि: शुल्क हो।
2) विशेष प्रस्ताव "पुस्तक भन्दा पहिले - कम भुक्तान गर्नुहोस्": तपाईंको कम्तिमा doot रात अग्रिम रहनुहोस्।
"टापुहरू" मा पनि, सबै भन्दा व्यावहारिक स्क्ट्स्टिक हेडनिकको छेउमा सर्छ। समुद्रमा, फूटरिंग पार्क मार्फत वाचुर चरित्र र ताजा तौलिएमा लाइभ संगीतमा सेवा गरिन्छ।
केहि दिनको लागि टेनिस खेल्न समय र। र यदि तपाइँ डेस्संजी मन पराउनुहुन्छ, शुक्रवार कब्जाको साथ तपाईंको छुट्टिहरू योजना: समुद्र तट होटेलमा, यो मीठो दाँतको आधिकारिक दिन हो।
sizily तातो सूर्यको लागि प्रसिद्ध छ। त्यहाँ पूर्ण सेतो बालुवा र कालो ढुb्गाको साथ बेडहरू छन्। माटोको स्नान को प्रेम गर्नेहरूले आफ्नै लागि ठाउँहरू पनि पाउँदछन्। तर तपाईले छनौट गर्नु आवश्यक छ, तपाईंले छनौट गर्नु आवश्यक छ, सिलीलीमा सबै अफरहरू हेर्नुहोस् र उपयुक्त संख्या छनौट गर्नुहोस्।
सब भन्दा सुविधाजनक विकल्प निजी बीचको साथ होटेल हो। यस्ता होटेलसँग धेरै फाइदाहरू हुन्छन्। पहिलो, समुद्री किनार पैदल दूरी भित्र छ। दोस्रो, होटलका गैर-निवासीहरूको लागि प्रवेश असम्भव छ, जुन समुद्र तट सफा र कम बनाउँदछ। तेस्रो, प्राय जसो तपाईंले सूर्यको बेडहरू, छाता र पेय पदार्थको भाँडा तिर्नु पर्दैन। हामीले तपाईंको लागि कम्पाइल गरेका छौं कि शीर्ष 10 साइकलको सूची कुनै बजेटमा हाम्रो आफ्नै निजी धारहरूको सूची।
सोचीको समुद्री किनारहरूको बारेमा मसँग ठूलो समीक्षा लेख छ -। यदि तपाईंले अझै पढ्नु भएको छैन भने - म अर्को समीक्षा पढ्नु अघि यो गर्न सिफारिस गर्दछु।
त्यहाँ मैले लेखें भने सोचकीमा 1 1300 समुद्र तटहरूमध्ये 300 जना नगरपालिका, नि: शुल्क शहर समुद्री तटहरू छन्। यो बाँकी छ कि बाँकी 1 मात्र केवल समुद्री किनारहरू हो जुन आफ्नै होटलहरू र अन्य रिसोर्ट वस्तुहरू स्वामित्वहरू छन्। एकातिर, यो एकदम धेरै छ। तर अर्कोतर्फ, सोचीमा होटलहरू धेरै छन् - तिनीहरू सयौं होइनन्, त्यहाँ हजारौं छन्!
त्यसैले, सरल अंकथिणिक आवेदन गर्दै हामी निष्कर्षमा पुग्छौं: सोचीको प्रत्येक होटेलको आफ्नै समुद्री किनार छैन।
किनकि त्यस्तो विकल्प कसैको लागि आधारभूत छैन। सोचीमा, त्यहाँ केहि गर्न बाँकी छ र समुद्र तट छुट्टी बाहेक। त्यस्ता पर्यटकहरूको लागि, यो लेख उपयोगी हुनेछ:
तर सबै पछि, गर्मीको मौसममा, प्रायजसो पर्यटकहरू समुद्रको नजिक र उनीहरूको समुद्री किनारमा होटल छनौट गर्छन्। यस लेखमा तपाईले आफ्नो सिफारिशहरू त्यस्ता आवास वस्तुहरूमा पाउनुहुनेछ।
<< p> कुनै निश्चित समयमा कुनै पनि मेजर रिमाड ड्रिलम्यानको भीडले भरियो, र सोचीको अपवाद छैन। कम्तिमा जो कोही पनि एक पटक यस शहरलाई उच्च मौसममा पुग्यो, यो समुद्री तटमा तातो जुलाईको बृद्धि भएको ठाउँमा भेट्टाउन गाह्रो हुन्छ।
वास्तवमा, यदि तपाईंलाई बच्चाहरूसँग राम्रो मनोरन्जन होटल चाहिन्छ भने, तपाईंको समुद्री तट र सबै सक्षम छ, केवल यी समीक्षाहरूमा भेट्ने एक छनौट गर्नुहोस्।
होटल स्विसोटेल सोची रिडिलिया एक सुन्दर क्षेत्रको साथ एक शानदार - स्टार बीच होटल हो र रिसोर्टको मध्य भागमा अवस्थित एक निजी बीच। मनोरन्जनकारी सेवाहरू स्वादिष्ट किचन, सम्मेलन हल र सम्मेलनहरूको साथ रेस्टुरेन्टहरू हुन्।
Vill play होटल कम्प्लेक्स यसको आफ्नै समुद्र तट संग प्रतिष्ठित बीच उच्च मूल्यांकन प्राप्त भयो र उही समयमा एक पौडी खेल्ने पोखरीमा एक उत्तम होटल हो। रेटिंग्समा उच्च पदहरू यस स्थापनाको एक जटिल सेवाहरूको पूर्ण दायराको कारणले कब्जा गर्दछ, जसको उपस्थितिले एक अविस्मरणीय र रूसनको तटमा रहन सक्छ।
VELWLY "भित्ता एलेना" कालो भवनमा अवस्थित छ, एक आधुनिक भवन (2012), पुरानो व्यापारी हवेली र अझै पनि प्रामाणिक सौन्दर्यको साथ प्रस्तुत गर्नुहोस् महिमा। केन्द्रीय भवन पार्क-पुरानो रूखहरूको साथ पार्क क्षेत्र द्वारा घेरिएको छ, राम्रोसँग राखिएको फूलको ओछ्यान र विरलै बोटहरू। यल्टा तटबन्ध होटल जटिलबाट 500 मिटर हो।
पाहुनाहरू एक प्रस्तुतीकरण वा कुनै अन्य कर्पोरेट घटना आयोजना गर्न को लागी, 100 व्यक्तिको लागि रेस्टुरेन्ट र सम्मेलन कोठाको फाइदा लिन सक्दछ।
<< p> पेटरले थप सेवाहरूलाई जनाउँछ: एक-स्टार रेस्टुरेन्टको साथ, कुनै पनि निकास घटनाको उचाई उचाइमा हुनेछ।
मौसमी शासनले सञ्चालन गर्ने जब पावलको रिसोर्ट क्षेत्रमा मूल्य निर्धारण गर्ने क्रममा भेलामा एलेना एलेना एलेना एलेना एलेना एलेनाटले पनि लागू गर्दछ। फेब्रुअरी मा यस संस्था मा सबै सस्तो हुनेछ - फेब्रुअरी मा सबै टाढाको मौसम। वसन्तबाट सुरु हुँदै, मूल्य बिस्तारै बृद्धि भएपछि सेप्टेम्बर सम्म, फेब्रुअरी स्तरमा2पटक भन्दा बढी।
<< p> के तपाईं NAHO TONG (भियतनाम) मा जान जाँदै हुनुहुन्छ? यदि तपाईं राम्रो होटल 3, or वा stars ताराहरूमा आराम गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंको आफ्नै समुद्र तट भएकोमा, यो चयनले तपाईंलाई पहिलो रेखामा सर्वश्रेष्ठ होटल छनौट गर्न मद्दत गर्दछ।